पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि हालको ठाउँ के हुन्छ ? - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि हालको ठाउँ के हुन्छ ?
चार विकल्पबारे छलफल
मंसिर १४, २०७८ प्रतीक्षा काफ्ले
कास्की — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउँदो जनवरी १ देखि आन्तरिक र वैशाख १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी छ । विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले निर्माण कार्य ८७ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सुरुवातमा पोखराबाट हङकङ, दिल्ली, दोहा र थाइल्यान्डमा सिधा उडान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यी सहरलाई ट्रान्जिट बनाएर अन्य मुलुकबाट पनि जहाज आउन सक्छन् । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सन् २०१७ नोभेम्बरदेखि ३ हजार ८ सय ९९ रोपनीमा विमानस्थल निर्माण कार्य भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार फोर डी मोडलमा विमानस्थल बनिरहेको छ । निर्माण पूरा भएपछि १ सय ५० देखि १ सय ८० सिट संख्या भएका एयरबस ए३२० र बोइङ ७५७ वा सो सरहका जहाज आउजाउ गर्न सक्ने आयोजनाले बताएको छ । फोर डी श्रेणीको भएकाले यसको रनवे लम्बाई २ हजार ५ सय मिटर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन भएपछि हाल भइरहेको पोखरा विमानस्थलको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने ठोस निर्णय भइसकेको छैन । हालको विमानस्थल खाली हुने भएपछि प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश सरकार, नेपाली सेना, पोखरा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रले सो ठाउँको उपयोगबारे आ–आफ्नै योजना अघि सारेका छन् ।
पाइलट ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने, निजी क्षेत्रले लिजमा लिएर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एकेडेमी संचालन गर्ने, नेपाल आर्मीले रेस्क्यू सेन्टर बनाउने या साहसिक खेलकुद उडान गर्ने । यी चार विकल्पबारे यतिबेला निजी तथा सरकारी तवरमा बहस चलिरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको चाहना भने हवाई क्षेत्रकै लागि उपयोग गर्ने छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले निजी क्षेत्रबाट विभिन्न योजना बनाइएको भए पनि निचोड भने निकाल्न नसकिएको बताए । उनी भन्छन् ‘जग्गा खाली राख्नु हुँदैन भनेर पाइलट ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने कुरा चलेको छ । हाल काठमाडौंमा भएको नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एकेडेमी बनाउने भन्ने चर्चा पनि छ, अर्कोतर्फ नेपाल आर्मीले पनि रेस्क्यू सेन्टर बनाउन खोजेको छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार २०१४ देखि संचालनमा आएको यस विमानस्थलको जग्गा ११ सय ५६ रोपनी छ । ११ सय ४७ मिटर लामो र ४० मिटर चौडाइको धावनमार्ग छ । हालको पोखरा विमानस्थलमा दैनिक २५ सयको हाराहारीमा यात्रु ओहोरदोहोर गर्छन् भने दिनको ३० हवाई उडान हुन्छ ।
पोखराबाट काठमाडौ, भरतपुर, भैरहवा, जोमसोम, नेपालगञ्ज र सिमरा गरी नियमित ६ ठाउँको उडान हुन्छ । कोरोना महामारीपूर्व पोखरा–विराटनगर उडान भएपनि हाल रोकिएको छ । विराटनगर र जनकपुरको अब उडान गर्ने तयारी भइरहेको सुवेदीले बताए । प्राधिकरणका अनुसार बुद्ध, यती, तारा, सिम्रिक, गुण र समिट एयरलाइन्सले उडान गर्दै आएका छन् । कोभिड महामारीपछि विदेशीभन्दा आन्तरिक यात्रु बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पोखरा विमानस्थलबाट दिनमा २० वटा उडान हेलिकोप्टर र अल्ट्रालाइटकै हुने सुवेदीले बताए । गण्डकी प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले चालु विमानस्थल संचालनबारे छलफल भइरहेको भएपनि निर्णय भने नभएको बताए । ‘संघीय सरकारसँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘माथिल्लो तहसम्म छलफल भइसकेको छैन । प्रदेशमै पनि ठोस छलफल भएको छैन् ।’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले चालु विमानस्थल प्रदेश सरकारको आफ्नो मातहतमा नभए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए । पर्यटकीय आकर्षण बनाउन खुला छाड्नुपर्ने माग आइरहँदा प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग छलफल चलाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले पुरानो विमानस्थललाई यथास्थितिमै राख्नुपर्ने बताए । ‘हामीलाई खुला चौर, पार्क चाहिन्छ’ उनले भने, ‘पोखरामा १० हजार अटाउने हल छैन । ठूला सभा सम्मेलन राख्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।’ उनले नेपालको मात्रै नभई एसियाकै नमुना पार्क बनाउन सकिने बताए । ‘पोखरामा बढी साहसिक खेलकुद छन्’ उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई असर नपुग्नेगरी खेलकुदका आन्तरिक उडान गर्नुपर्छ । तर, सुरक्षा निकायलाई दिनुहुँदैन ।’ उनले बजारभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको तालिम केन्द्र बनाउन सकिने बताउँदै विमानस्थलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १२:२९
मंसिर १४, २०७८ राजकुमार कार्की
सिन्धुली — सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ रातमाटामा भिषण आगलागी भएको छ । त्यहाँस्थित शाह आइरन एन्ड इलेक्ट्रिक सेन्टरमा मंगलबार १० बजेदेखि आगलागी हुँदा करोडौंको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ ।
प्रारम्भिक जानकारी अनुसार विद्युत् सट भएर हर्डवेयरको गोदामबाट आगलागी सुरु भएको थियो । जस्ताको छाना लगाएर २० वटा गोदामको कोठामा रहेको सबै सामान आगलागीमा परेको छ ।
कमलामाई नगरपालिकाको दमकलले आगो निभाउने प्रयास गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म आगो निभेको छैन । प्रहरीका अनुसार हार्डवेयरको गोदामा आगोले चाँडो टिप्ने सामान भएकाले आगलागी पूरै नियन्त्रणमा लिन नसकिएको हो । आगलागी नियन्त्रणमा आइनसकेकाले के कति क्षति भयो भन्ने आकलन हुन नसकेको प्रहरीले बताएको छ । संचालक सिकन्दर शाहका अनुसार आगलागीबाट ५ करोडभन्दा बढीको सामान जलेर नष्ट भएको छ ।
हार्डवेयर, विद्युत्, प्लाई, लगायतका सामान गोदाममा भण्डारण गरिएको थियो । स्थानीय, सशस्त्र र जनपथ प्रहरीले आगोले नभेटेको सामान सुरक्षितस्थानतर्फ फालिरहेका छन् । आगलागी भएपछि मानिसको भीड भएकाले बीपी राजमार्गसमेत अवरुद्ध भएको छ ।
आगलागी नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको सिन्धुली प्रहरीका डिएसपी मनोजकुमार लामाले जानकारी दिए । शाह आइरनसँगै रहेको कनिस्का इन्टरप्राइजेजमा पनि आगलागिले क्षति पुर्‍याएको जनाइएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १२:११
पुस मसान्तसम्म ११ बैंकको निक्षेप घट्यो
साताको सेयर समीक्षा: सबैभन्दा धेरै बढ्यो बैंकिङ उपसमूह
विराटनगर भन्सारबाट हुने आयात-निर्यात आधा बढीले घट्यो, राजश्व प्रभावित
मासिँदै रैथाने बाली
हुम्लामा ४ महिनापछि चामल ढुवानी